लक्ष्य–निर्धारण - Harish Bk
Article Of Dr. Yogi Vikashnanda
लक्ष्य–निर्धारणले जादूको जस्तो काम गर्छ, अर्थात् अविश्वसनीय काम । जोन गोडार्डले सुने–“जे–जे लक्ष्य लेखेर राखिन्छ ती लक्ष्य एक न एक दिन पूरा भइ छाड्छ, मात्र यसप्रति आपूm समर्पित हुनु पर्छ” ।
उनी उत्साहित भए । हत्त–न–पत्त डायरीमा लेखे– जीवनभरीमा गर्न मन लागेका सबै कुरा, बुँदेवार, जम्मा–जम्मी १२७ वटा । पछि त्यसलाई ठूलो कागजमा, ठूलै अक्षरले लेखेर आपूm सुत्ने कोठाको भित्तामैं टाँसेर राखे, उठ्नासाथ आँखाले देख्ने गरी । अचम्मको कुरा अहिले उनी बूढा भैसकेका छन् र उनका झण्डै सवै अर्थात् १०९वटा लक्ष्य खेली–खेली पूरा भैसकेका छन् । योभन्दा पनि उदेक लाग्दो कुरा–उनी गोहीको मुखैमा पर्दा–पर्दै पनि जोगिए, अझ उनी एबिलभ क्रासमा परेर पनि बाँच्न सफल भए ! किन होला ? किनभने उनलाई आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न अझै बाँच्नु थियो र त उनी बाँचिरहे । यस्तै उनलाई २० औँ सताब्दीमैं क्यान्सर भैसकेको थियो तर उनले २१ सताब्दी हेर्ने लक्ष्य लेखे र उनी अभैm जीवितै छन् ! लक्ष्य निर्धारित भए काललाई समेत पछि ढकेल्न सक्ने यो भन्दा ठूलो अरू उदाहरण के पो होला ?